Okuphrintiwe: Ukufunwa Kokuphrinta Okudingekayo Nokufekethiswa | Martech Zone
Okuphrintiwe: Ukufunwa Kwe-On-Demand Nokugcwalisa Okufekethisiwe
NgoMsombuluko, Februwari 15, 2021 NgoMsombuluko, Februwari 15, 2021 Douglas Karr
Okunye kwamagama okungeyona okwehliswayo ukuthi uvala ukulahlekelwa yinzuzo njengoba ukhokhela abanye abahlinzeki ukuphrinta nokufeza imikhiqizo yakho. Lokho empeleni akunjalo neze. Inkinga enkulu izindleko zokuqalisa zokwakha izikhungo zakho zokugcina nokugcwalisa ukuze zikwazi ukukhula.
AbakwaDropshippers bangazuza ngaphezu kuka-50% wenzuzo eningi kunaleyo egcina uhlu lwayo lwesitoko. Ngokwengeziwe, izinkampani ezivula ukugcwaliseka kwazo kuze kufike ekuthengiseni ngokusebenzisa isipiliyoni sokudonsa zingaphezu kwe-18% inzuzo eningi.
Ukugcwaliseka kokuphrinta kokufunwayo nokuphrinta kokufekethiswa kunenqubo yokugcwaliseka kwelebula elimhlophe enamandla kakhulu kanye nezinhlobonhlobo zezingubo nezinto zasendlini ezinokwenziwa ngokwezifiso ngokuphelele kumkhiqizo wakho. Noma ngabe ungathanda ukwenza imikhiqizo ehlukahlukene ibe maphakathi nebhizinisi lakho lonke… noma ufuna ukunikela ngemikhiqizo yakho enophawu lokuthengisa, iPrintful iyindlela enhle yokukala ngokushesha.
Ungami lapho, noma kunjalo. Ngenkathi iPrintful ingumhlinzeki wakho wokuphrinta-on-demand kanye nensizakalo yokufeza… usadinga ipulatifomu ye-ecommerce kanye nesikhulumi sokumaketha esizisebenzelayo ukuphatha inqola yokuthenga elahliwe nokunye ukuxhumana.
Isebenza Kanjani Ukuphrinta
Ama-oda wakho ahanjiswa ngqo ngohlelo oluphrintiwe kusayithi lakho le-ecommerce… ngakho-ke akudingeki ukuthi wenze noma yini ngaphandle kokusebenzela ukudala kwakho nokumaketha ibhizinisi lakho.
Enye yamandla wokuphrinta yinjini yayo enamandla yokuhlanganisa kanye nezithombe ezahlukahlukene zomkhiqizo ezingafakwa kusayithi lakho le-ecommerce. Vele ulayishe ubuciko bakho, ukhethe uhlobo lomkhiqizo nezincazelo, bese wenza isithombe ongathanda ukusikhombisa kusayithi lakho. Akunasidingo sama-photoshoots noma amamodeli… konke kwakhelwe ngaphakathi!
Yenza umkhiqizo manje
Indawo yokugcina impahla ephrintiwe nokugcwaliseka
Ukuphrinta kunakekela ukuphrinta, ukuletha, kanye nokwamukela imbuyiselo yomkhiqizo wakho. Uma isizathu sokubuyiselwa kwakuyiphutha lePrintful - bahlanganisa nezindleko.
Ukuphrinta kunezindawo eziyi-8 emhlabeni jikelele, ezinezindawo ezintathu e-United States: ezimbili eCharlotte, NC, eyodwa eValencia, CA, nenye indawo yabo entsha eDallas, TX.
Funda kabanzi Bhalisela Ukuphrinta
Ukuthengisa Imikhiqizo Yakho ku-Shopify
Isincomo sami sengxenyekazi elula ye-ecommerce ongayisebenzisa Thenga. Inembile impela, inenjini ephelele yethempulethi, futhi inokuhlanganiswa okumangazayo nethoni lamanye amapulatifomu okuphatha, ukumaketha nokukhulisa ibhizinisi lakho le-ecommerce.
Izinyathelo zilula kakhulu:
Faka uhlelo lokusebenza oluprintiwe ku-Shopify
Faka imikhiqizo ongathanda ukuyengeza esitolo sakho.
Yenza ngezifiso izincazelo zomkhiqizo wakho.
Nika amandla amanani akho abukhoma… uma unokuthumela kwamahhala, qiniseka ukumboza lokho ngamazinga akho abukhoma.
Vula iSitolo Sakho Sokuthenga
Lungiselela futhi uhlanganise i-Klaviyo Marketing Automation
Lapho usunesayithi le-ecommerce futhi lisebenza, akwanele. Ngangibhalisela uKlaviyo kakhulu. UKlaviyo uzophatha yonke into kusuka ekubhalisweni kwencwadi yezindaba, okunikezwayo okuzivelelayo (ngenhloso yokuphuma), izikhumbuzo zezinqola zokuthenga ezishiyiwe… nakho konke okuphakathi.
Yipulatifomu emangalisayo enezinto ezishintshayo ezilungele ukuphuma ngqo ebhokisini… vele uzenze ngokwezifiso ngomkhiqizo wakho, ulungise imiyalezo, bese uzibeka bukhoma.
Ukudalulwa: Ngisebenzisa izixhumanisi zami ezihambisanayo kulesi sihloko.
Tags: Ukuthumela ukudonsaukwehlaukugcwaliseka kwe-ecommerceukubuya kwe-ecommerceefekethisiweimifekethiso ngokufunwakusebenza kanjani ukuthunyelwa kokuthumelakusebenza kanjani ukuphrinta-kokufunwayoKlaviyophrinta ngokufunwakuyaphrintwaShopify futhi klaviyoShopify nokuphrintashopify klaviyo ephrintiwebusisiweukugcwaliseka kwelebula elimhlophe
Uhlobo: Shintsha Ukuqoqwa Kwedatha Kube Isipiliyoni Somuntu